Caqabado: Tallaabooyinka Si Loogu Sameeyo Hubinta Websaydkaaga Ka Hackers
Hal cabsi weyn oo mulkiilayaasha bogagga waa inay la noolaadaan waa fikrad qof ka bedelayashaqeyn, ama si dhammaystiran u tirtir. Dhisidda waxyaabaha ku jira websiteka waxay qaadataa shaqo adag, isla sidaas ayaana loo sameeyaa si loo ilaaliyo.
Marka laga reebo sameynta diiwaanka caadiga ah, halkan waxaa ku qoran liiska talooyin diyaariyay Michael Brown, Sare Maareeyaha Guusha Macaamilka, kaas oo u adeegsan doona si loo hubiyo nabadgelyadaada bogga:
1. Dib u cusbooneysii dhammaan meheradaha iyo qoraallada
Waxyaabaha ugu fiican ee la sameeyo waa in la cusbooneysiiyo dhammaan meheradaha iyo qoraallada lagu rakibay browserkasi joogto ah. Sababta ayaa ah in qalabkani uu inta badan haysto codad furan oo furan, kuwaas oo diyaar u ah horumarinta dadka leh ujeedooyin fiican iyo sidoo kalejilayaasha - drying soybeans grain dryer. Kiisaska Hackers ayaa laga yaabaa inay soo rogaan xeerka, iyagoo raadinaya wixii daciif ah ama cillado ay ka faa'iideysan karaan si ay u helaan gelitaanka iyo xakamayntawebsite-ka. Cusboonaysiinta waqti badan ma qaadanayso si loo dhamaystiro oo wax looga qabto dhibaatooyinkaas si waxtar leh.
2. Ku rakib macaamiisha ammaanka marka loo baahdo
Ka dib markii isku daygii la cusbooneysiiyay hore loo sheegay, hubi in browserka uu leeyahay nabadgelyoplugins loo rakibay si looga hortago wixii isku day ah ee ay sameeyaan hackers inay soo galaan iyadoon fasax laga haysan. Qalabka ammaanku wuxuu wax ka qabtaa daciifnimada hareerahamashiin kasta oo wax u dhimaya waxqabadyada jebinta jebinta. Haddii kale, SiteLock waa qalab u socda miyiga dheeriga ah si joogto ahkormeerka warbixinnada ka dib markii foils barta hacking. Haddii guusha ganacsigu ay ku tiirsan tahay shaqada ku habboon ee bogga, ka dibna SiteLockwaa maalgashi qiimo leh.
3. Isticmaal HTTPS
Marka la isticmaalayo HTTPS, mid ayaa laga yaabaa inuu ogaado in calaamad cagaaran ay ka muuqanayso baraha barahaiyada oo u digaysa in mid ka mid ah uu ku saabsan yahay bixinta macluumaadka xasaasiga ah ee website-ka. Shan iyo shan xaraf waa calaamad muhiim u ah ammaankaiyo in ay amaan tahay in la bixiyo macluumaadka la codsaday..Haddii goobta ganacsiga u baahan tahay martida si ay u bixiyaan macluumaadkooda gaarka ah, ka dibwaa in lagu maalgeliyo shahaadada SSL. Waxay ku soo baxaysaa kharash dheeraad ah laakiin waxay si dheer u socotaa dhisidda kalsoonida goobta iyo samayntawaxay ka badbaado badan tahay.
4. Su'aalaha la baaray
Noocyada ugu caansan ee shabakadaha internetka ee leh goobo badan oo dhibbanaha ah ayaa ah kuwa la xiriira SQLirbado. Cirbadaha SQL waxay ku xiran yihiin foomamka shabakadaha ama URL-yada ee bixiya macluumaadka dibadda si ay u soo gudbiyaan macluumaadka markay yihiinbidix si loo furo. Maxaa dhacaya waa shabakadaha internetka ee khawano-geliyeyaashu ku qoraan shabakada internetka kaas oo u oggolaanaya inay si sahlan u galaan markastarabto. Waa dhibaato u leh milkiilayaasha boggaga sida ay u maleynayaan inay ilaaliyaan macluumaadka gaarka ah ee macaamiisha ku kalsoon yihiin inay sameeyaan. Parameterizedwaydiimo waydiistay in koodhka loo isticmaalo website-ka uu yahay mid go'an oo sidaas awgeed ma jirto meel loogu talagalay darajooyinka. Hackers-ka ayaa raadinaya wax aan macquul aheyn in la garaaco.
5. Nidaamka Badbaadada Macluumaadka (CSP)
Meel kale oo dhexdhexaad ah oo website-ka loo yaqaan 'hackers' isticmaala waa weerarrada iskutallaabta (XXS). Iyadoo loo marayo, waxay maamushaa in ay ka dhigto jadwal xunkoodka bogagga bogagga. Istaraatijiyad loo adeegsanayo oo la wadaago CSP taas oo u oggolaanaysa user in uu qeexo domains in browser ahwaa inay tixgeliyaan sida ilo sharci ah oo ka mid ah qoraallada la fulin karo marka ay ku soo galaan bogga inay ku filnaadaan. Browserku markaa wuu iska indha-tirayaa dhammaankuwa kale ee aan ku jirin liistada dardaaranka loo oggol yahay in ay isbedel ku sameeyaan bogagga bogagga.
6. Soodejinta sirta ah
Dadku waxay doortaan inay doortaan furaha sirta ah ee ay u sahlan tahay in ay xasuustaan. Si kastaba ha noqotee, mid waa inuu ku dadaalaa inuu ka fekero sirta xasiloon.Mudada dheer ee erayga sirta ah, waa ka sii fiican. Waa inay isticmaalaan jilayaasha, tirooyinka, iyo waraaqaha. Furaha sirta ah ayaa dhigaya sharafnimadashabakada qadka. Si isku mid ah, u samee shuruud isku mid ah ereyada sirta ah ee isticmaala dadka isticmaala.
7. Xakee liistada iyo rukhsiyada faylka
Fayl iyo fayl kasta oo ku jira websiteka waxay leeyihiin shuruudo ogolaansho iyo koontaroolid sida qofka akhriyi kara, qori kara, ama u fulin lahaa. Ka dhigkuwaas oo helaya ogolaansho kasta oo ku salaysan isticmaalaha iyo kooxda ay ka tirsan yihiin.